I-Tshukudu Bush Lodge - iyindawo yokulala yaseSun City
ITshukudu Bush Lodge
e-Pilanesberg National Park, eNingizimu Afrika
I-Tshukudu Bush Lodge iyindawo yokulala yaseSun City ehamba ngezintaba eziqhakazile imibono emangalisayo phezu kwePilanesberg National Park.
Ukushayela umdlalo okuthakazelisayo ukulandelela i-Big Five
I-Malaria mahhala yokuhlala ngaseSun City
Ukunakekelwa okujabulisayo nezindawo zomhlangano
Utholakale emdlalweni ocebile wePilanesberg National Park
I-Tshukudu Bush Lodge inikeza izivakashi indawo yokunethezeka e-Sun City safari yokuhlala endaweni e-Afrika. Uhlangabezana nokulandelela i-Big Five - ingonyama, indlovu, ingwe, ibhulo kanye nehhhino - kumshayeli wezemidlalo othakazelisayo. I-Pilanesberg National Park ayikho i-malaria futhi inezinhlobo ezihlukahlukene ezingaphezu kuka-360 zezinyoni.
Hlala ngokunethezeka ngenkathi ujabulela ukuthula kwesihlahla sase-Afrika. Izilwane zasendle zase-Afrika ezivela kubhawuni lakho langasese. Qedela usuku lwakho ngokuzilibazisa embhedeni wase-Afrika oshisayo. Indawo yokuhlala yaseSun City inezindlu ezingu-6 ezikhethekile, ukuqinisekisa ubumfihlo.
I-Tshukudu Bush Lodge iseduze ne-Sun City. Vakashela ikhasino noma ubuke omunye wemiboniso. Le ndawo ehlala eduze ne-Sun City ilungele amadili nezinkomfa. Izinsiza zifaka iphrojekthi ye-slide, isikrini esithintekayo, ishadi leflip, i-TV, i-VCR kanye neprojector eyengeziwe.